အောင်သွယ်တော် ဖိုးတယ်လီဖုန်း | PoemsCorner
သူကတော. ဒီခေတ်လူငယ်တော်တော်များများရဲ. မိတ်ဆွေ တယ်လီဖုန်းလို.ခေါ်တဲ. (GSM,CDMA,… ) အစရှိတဲ. ဖုန်းတွေပေါ.။ ဒီခေတ်မှာကလဲ လူငယ်တွေလက်ထဲမှာက စာအုပ်စာပေသာ မကိုင်ရှိမယ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးစီကိုတော.ခပ်ကြွားကြွားလေးကိုင်တတ်ကြတာကိုး။အဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်လေးကဖြစ်စေ၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေ စိတ်ဝင်စားလို. ချစ်မိလို. မြတ်နိုးလို. အများကြီးပေါ.ပြောကြတာတွေက။ အဲဒါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်လေးစပြီးစုံစမ်းရမယ်ဆိုတာ လူငယ်တိုင်းသဘောပေါက်နေကြတယ်။ ဖုန်းထဲကနေမှ ဟို … ဘယ်သူ …အဲလိုတွေပေါ.။ဂျီတော.မှာတွေ.တာလေ သတိရနေလို. ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ ဘာညာတွေပေါ.။ အဲလိုကနေပဲ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ.ကွယ်။အဲ ဆိုလိုချင်တာလေးရောက်အောင်ရေးရရင် အောင်သွယ်တော်တွေရဲ. တူတဲ.အချက်လေးတွေကိုပြောချင်တာပေါ.ဗျာ။အဲလိုဆိုတော.ကာ လမင်းကစပြောမယ် ။လမင်းကတော. သူအောင်သွယ်နိုင်တဲ.အချိန် ကကန်.သတ်ထားတာပေါ. လပြည်.ညမှာပဲ သူအလုပ် ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်လေ။ နောက်တဖြည်းဖြည်း ကွယ်သွားတာလေ။ နောက်တစ်လပြည်.မှပဲ အလုပ်ပြန်လုပ်တော.တာပေါ.။ မြှားနတ်မောင်ကကျတော.လည်း ဘယ်နားနေဘည်းတောင်မသိဘူး။ အချိန်ကျမှသာ ပေါင်းသင်းသင်.တဲ.လူတွေချင်းဆုံပေးတဲ.နတ်ကလေးပေါ.။ သူကလည်းစိတ်ကူးရမှပဲမလား။ သူစိတ်ကူးမပေါက်ပြန်ရင် ဘာမှလုပ်ခိုင်းလို.မ၇ပြန်ဘူးလေ။ အဲလိုပဲပေါ.ဗျာ တယ်လီဖုန်းကလည်း သူ.မာန်လေးနဲ.သူတော.ရှိတာပေါ.။ ဆက်တိုင်းတော.မရဘူးလေ ။လူကြီးမင်းတို. ၊ဆက်သွယ်မှုဧရီယာပြင်ပတို.၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းများမအားသေးပါရှင်တို. လိုတမန်တော်တွေကရှိသေးတယ်။ခွင်.ပြုတဲ.အခါမှပဲ မြန်မြန်ပြောရတယ်လေ။ ပြောနေရင်းကနေပြီးတောလည်းတစ်ခါတလေ သူကပျောက်ချင်ရင်ပျောက်သွားသေးတာ တန်ခိုးရှင်ပဲကိုး။ သူကပြီးတော.လမင်းနဲ.တူတာလေးရှိသေးတယ်ဗျ ။ လမင်းခမျာမလည်း လဆုတ်လို. တိမ်ဖုန်းသွားရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ရှာသလို ဖုန်းလေခမျှာမလဲ ဘီလ်ကုန်လို. ရုံးကဖြတ်လိုက်ရင် အသက်မရှိတောသလိုပါပဲလေ။ ငွေလေးသွားဆောင်ကာမှ သူ.ခမျာ အသက်ရှူရတောတာပေါ.ကွယ်။ ပြောခနှုန်းတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း တတ်နေတာဆိုတော. သူ.ခမျာလည်း သိပ်အလုပ်မရှိရှာပါဘူး။ အဲဒီတော. ချစ်သူတွေ အချင်းချင်း ကိုအောင်သွယ်ပေးတဲ. တယ်လီဖုန်းလေးကို လိုအပ်လို.အသုံးပြုရင် မြန်မြန် အကျိုးဆောင်အောင်သွယ်ပေးနိုင်ဘို. လူးကြီးမင်း ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းများတို.၊ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပတို.လို တမန်တော်တွေရန်ကဝေးပါစေ ။ ဖုန်းဘီလ် ဈေးတွေကျပါစေလို. ချစ်သူများနေ.ရောက်တိုင်းဆုတောင်းကြပါဆို.လားကွယ်။
In: ဆောင်းပါး Posted By: ko lin htet aung Date: Nov 26, 2010
Leave comment 1 Comment & 307 views
By: ei lay at Dec 27, 2012